पुजा शर्माका ५ मिल्ने साथीः सुदर्शनदेखि प्रियंकासम्म – aishworya
नायिका पुजा शर्मा निर्देशक शुदर्शन थापाँसँग नजिक छन् भन्ने त सबैलाई थाहा छ । तर, नेपाली फिल्म इन्डष्ट्रीमा उनका मिल्ने अरु साथीहरु नभएका होइनन् ।
खुल्ला र फरासिलो मिजासका कारण पुजा जोसुकै सँग चाँडै घुलमिल हुन्छिन् । त्यसैले उनीसँग साथीहरुको अभाव छैन । ‘फ्रेन्डसिप डे’ को अवसरमा हामीले उनलाई सबैभन्दा मिल्ने पाँच साथीहरुको विषयमा सोध्यौं । उनले सुदर्शन थापा, आकाश श्रेष्ठ, रेखा थापा, छुल्ठिम गुरुङ र प्रियंका कार्कीलाई आफ्नो मिल्ने साथीको रुपमा प्रस्तुत गर्दै उनीहरुको विषयमा यस्तो धारणा सुनाइन् ः
१. सुदर्शन थापा
सुदर्शन थापासँग मेरो भेट भएको पाँच वर्ष भयो । म त्यतिबेला एउटा टिभीमा रिपोर्टर थिएँ । एक कार्यक्रममा रिपोर्टिङका लागि जाँदा उहाँसँग भेट र चिनजान भएको थियो । त्यसपछि बिस्तारै हामी नजिक हुँदै गयौं र अन्ततः राम्रो साथीमा परिणत भयौं ।
सुदर्शनजीसँग मेरो प्रोफेसनल र व्यक्तिगत दुवैखाले सम्वन्ध छ । हामी अहिले विजनेस पार्टनर पनि हौं । एउटै अफिस भएकाले प्राय सँगै हुन्छौं । फिल्म निर्माण र अभिनयका क्रममा मैले उहाँबाट धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएकी छु । मिडियाहरुले हाम्रो सम्वन्धमाथि विभिन्न टिप्पणीहरु गरे तापनि हामी राम्रो साथी मात्र हौं । हामीले एक अर्कालाई राम्ररी बुझेका छौं ।
सुदर्शनजीको विषयमा कुरा गर्दा उहाँ एकदमै जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ । कुनै पनि काममा सतप्रतिशत दिनुहुन्छ । आफ्नो परिवारलाई भन्दा पनि कामलाई बढि महत्व दिनुहून्छ । उहाँकै कारणले हाम्रो सहकार्य अहिलेसम्म सफल भइरहेको ठानेकी छु । जो कोहीलाई छिट्टै विश्वास गरिहाल्ने स्वभाव चाहिँ उहाँले सुधार गर्नुपर्छ ।
२. आकाश श्रेष्ठ
आकाशसँग मेरो सम्वन्ध धेरै लामो होइन । चिन्न त पहिलेदेखि चिन्थेँ, तर गएको फागुनमा मात्र भेट भएको हो । र, अहिले मलाई महसुस भइरहेको छ, कि काम गर्न यति सहज हिरो मैले अहिलेसम्म भेटेको थिइनँ ।
सुदर्शनजीले आकाशलाई हाम्रो फिल्ममा नायक बनाउने प्रस्ताव राख्नुभयो, जसमा म पनि सहमत भएँ । उसँग काम गर्ने क्रममा चाँडै नै म उबाट प्रभावित भएँ । उ आफ्नो प्रोफेसनल काममा एकदम सतर्क छ । प्रोड्यूसरमाथि अनावश्यक डिमान्ड राखेर दुख दिने सोच उसको छैन ।
आकाशको स्वभावको कुरा गर्दा चाँडै कसैसँग घुलमिल हुँदैन । तर, एकपटक घुलमिल भइसकेपछि एकदम विश्वासिलो छ । रामकहानीको सुटिङका क्रममा म र सुदर्शनजीसँग मात्रै बढि घुलमिल हुन्थ्यो ।
आकाशले सुधार्नुपर्ने कुरा चाहिँ, एकदम कम बोल्छ । जहाँ पनि बोल्नेको पिठो बिक्ने हो । फिल्म इन्डष्ट्रीमा त यो झनै लागू हुन्छ । त्यसैले उसलाई आफूलाई अझै खुल्ला र बोलक्कड बनाउनुपर्छ । म आकाशसँग धेरैभन्दा धेरै फिल्ममा काम गर्न चाहन्छु ।
३. रेखा थापा
फिल्म इन्डष्ट्रीमा आएदेखि नै म रेखा दिदीसँग नजिक छु । यद्यपि उहाँसँग कुनै फिल्ममा सहकार्यको मौका भने पाएकी छैन । उहाँ पनि फिल्म निर्माणमा सक्रिय हुनुहुन्छ, र म पनि । हाम्रो फिल्मको प्राविधिक कामहरु एउटै ठाउँमा हुने हुँदा बारम्बार भेट भइरहन्छ ।
रेखा दिदी सिनियर एक्ट्रेस भएर पनि कहिल्यै घमण्ड देखेकी छैन । मलाई एकदम माया गर्नुहुन्छ । हामी बेलाबखत घुम्न पनि गइरहन्छौ । प्रोग्रामहरुमा पनि भेट भइरहन्छ ।
रेखा दिदी खुल्ला किताबजस्तो हुनुहून्छ । मनमा जे छ त्यही बोल्नुहून्छ । यस्तो स्वभावले गर्दा कहिलेकाहीँ विवादमा पनि पर्नुहुन्छ । यद्यपि, मलाई चाहिँ उहाँको स्वभाव मन पर्छ ।
४. छुल्ठिम गुरुङ
छुल्ठिमसँग दुई-तीन वर्षदेखि मेरो मित्रता छ । हामी नियमित भेट भइरहन्छौं । मलाई उसको हरेक कुरा मन पर्छ । एकदम रमाइलो गर्नुपर्ने र जिस्किनुपर्ने स्वभाव छ । उनी भएपनि जहाँ पनि रमाइलो माहोल हुन्छ ।
उ एउटी प्रतिभाशाली कलाकार पनि हो । नोभेम्बर रेनमा उसको अभिनयबाट म निकै प्रभावित बनेको थिएँ । छुल्ठिमसँग सँगै काम गर्ने मेरो चाहना अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । भविष्यमा मैले बनाउने फिल्ममा उसलाई फिट हुने रोल भयो भन्ने पक्कै पनि खेलाउनेछु ।
उसको पनि जोसुकैलाई छिट्टै विश्वास गर्ने स्वभाव छ । यो चाहिँ सुधार्नुपर्छ ।
५. प्रियंका कार्की
मैले पहिलो फिल्म ‘थ्री लभर्स’ मा नै पि्रयंकासँग सहकार्य गरेकी हुँ । त्यसयता हामीबीच निरन्तर राम्रो मित्रता छ । प्रियंकाको लिड रोल रहेको ‘मेरो वेस्टफ्रेन्ड मा पनि मैले गेस्ट रोल गरेकी थिएँ ।
प्रियंका जो कसैसँग चाँडै नजिक हुन्छिन् । फिल्म इन्डष्ट्रीमा उनको सायदै कसैसँग नराम्रो सम्वन्ध होला । रिलेसन मेन्टेन गर्न एकदम खप्पिस छिन् । हामीबीच व्यक्तिगत कुराहरु पनि धेरै सेयर हुन्छन् । म उनको परिवारका सबैसँग नजिक छु । घरमा आउजाउ भइरहन्छ ।
प्रियंका नेपाली फिल्म इन्डष्ट्रीमा सम्भवत सबैभन्दा बढि गसिप बनाइने हिरोइन हुन् । यस्ता गसिपहरु प्राय नेगेटिभ हुन्छन् । म उनलाई मिडियाका गसिपहरुलाई लिएर सिरियस नहुन सल्लाह दिने गर्छु ।
प्रियंका अहिले आयूष्मान देशराजसँग विवाहको तयारीमा छिन् । उनीहरुले सार्वजनिक रुपमा आफ्नो प्रेमलाई निर्धक्क प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । प्रियंकाको यो बोल्डनेस मलाई मन पर्छ । प्रेम छ भने लुकाउने किन ?
आर्यन र साम्राज्ञीको ‘कायरा’ यात्रा